“ကိုပေါက်လမ်းသလားနေသည် အပိုင်း(12-B)” (တောင်ကြီး မြို့ကရေတံခွန်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » “ကိုပေါက်လမ်းသလားနေသည် အပိုင်း(12-B)” (တောင်ကြီး မြို့ကရေတံခွန်)
“ကိုပေါက်လမ်းသလားနေသည် အပိုင်း(12-B)” (တောင်ကြီး မြို့ကရေတံခွန်)
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Oct 14, 2011 in Local Guides, Photography | 29 comments
အဆင်းလမ်းမှာ ငေးမောရင်း မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်း
စိတ်ထဲမှာ အေးသာယာ စပျစ်ခြံနားရောက်မှ အဆင်းလမ်းနဲ့အတက်လမ်းဆုံတော့မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်သွားလိုက်လုပ်နေရင်းက တောင်ကျောပေါ်ကနေ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဆင်းလာတာတွေ့တော့ဝမ်းသာ
လမ်းမှာ ပန်းအနီတွေလှိုင်နေအောင်ပွင့်တဲ့ အပင်လေးကို လှလို့ အားပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
အမည်မသိတဲ့ ပန်းနီနီ တောင်တက်လမ်းကို ကူးတဲ့ဘက်မှာ
တောင်ကြီးလမ်းမှာတူညီတဲ့ ပါဖော့်မင်းကတော့ နွယ်ပင်တွေက အပင်စောက်ကြီးတွေကို တွဲလွဲခိုစီးနေတာပါဘဲ။
ဆက်လျှောက်နေရင်းက နေအနောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ ကျနော်ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်လွန်းတဲ့ရေတံခွန်ကို
ဟို့တောင်ပေါ်အမြင့်ကြီး နီနီရဲရဲတောင်ကမ္ဘားယံကနေ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ခုန်ဆင်းနေတဲ့ရေတံခွန်ကြီးပါဘဲ။
အတော်ဝေးဝေးလေးမှာရှိနေပေမယ့် ရေကျသံတွေကတော့ တဝေါဝေါ တဟဲဟဲ။
ရေတံခွန်က ဝေးပေမယ့် မြင်ရတာ လှပ
တောင်ကြီးရဲ့အောက်မှာတော့ တိမ်ခိုးတွေကြားက မြို့ကလေးရဲ့ အိမ်ကလေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဆက်လျှောက်နေရင်း မိုးတွေအုံ့ဆိုင်းလို့ ညိုမိူင်းနေပြီးလူက လဲ မိုးငွေ့ တိမ်ခိုးကြားမှာရောက်နေသလိုခံစားရပါတယ်။
ကျနော်ရင်ကို ထိရှသွားစေ မိန်းမောသွားစေတဲ့မြင်ကွင်းပါ
အဲဒီတော့ မှအတက်လမ်းမှာရေတံခွန် (2)ခုရိတယ်ဆိုတာကို သိပါတော့တယ်။
ဟိုးအတော်မြင့်မြင့်ကနေစီးဆင်းလာပြီး မေမြိုသို့မဟုတ်ပြင်ဦးလွင်က ဘီးအီးဖောနဲ့ဆင်တူပါတယ်။
နေရာအမျိုးမျုိး ဒေါင့်အမျုိးမျုိးက နေဓါတ်ပုံတွေတဖျပ်ဖျပ်နဲ့ တစ်ယောက်ထဲ စိတ်တိုင်းကျ ဆွဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘေးနားမှာကတော့ ဧရာမကျောက်တုံးကြီးတွေရှိပေမယ့် ရေညိတွေရှိနေတာရယ် တစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေတာ
နောက်တော့ လမ်းသာဆက်ပြီးလျောက်လာတာ လူလဲ ပင်တော့ အတော်ပင်ပန်းနေပါပြီ။
မိုးကာဂျာကင်အောက်က တီရှပ်ကလဲ ချွေးတွေနဲ့ ရွှဲရွှဲစိုလို့နေပါတယ်။
ကံကောင်းတာကတော့မိုးငွေ့တွေ တောင်ခိုးတွေဝေနဲ့လမ်းပေါ်လျှောက်နေရတော့ ရာသီဥတုက ခပ်အေးအေးလေးရှိနေသလို လတ်ဆတ်တဲ့လေကိုရူရပြန်တော့ နည်းနည်းတော့ အမောပြေပါတယ်။
မနက်ခြောက်နာရီကျော်ကျော်လောက်ဆိုတော့လဲ ကိုယ်ပိုင်ကားတွေ ဟိုင်းလတ်လိုင်းကားလေးတွေတက်လာတာ
ပိုတွေ့ရတာကတော့ ဆိုင်ကယ်လေးတွေတ၀ှီးဝှီးနဲ့တက်သွားတာမြင်လေ လောလောဆယ်ဆိုင်ကယ်သာ
ရှိရင်ဆိုတဲ့ အတွေးက ဖိစီးလေလေလေပါဘဲ။
ဒါပေမယ့် ကျနော်စီးရမယ့်လိုင်းကားကတော့ ပေါ်မလာပါဘူး။
လူကလဲ စုစုပေါင်းသုံးမိုင်ကျော်ကျော်လောက်လမ်းလျှောက်လာရတော့ အတော်လေးကိုမောနေပါပြီ။
ကိုယ်လိုချင်တာရပြီဆိုမှ လူကလဲ ညောင်းရမှန်းပင်ပန်းရမှန်းသိလာပါတယ်။
ကားစောင့်နေတာဆိုတာနဲ့ သူနဲ့အတူတူ ကားစောင့်လိုက်ပါတော့တယ်။
သိပ်မကြာခင်မှာလူအပြည့်နဲ့ မြို့ပတ်ဘတ်စကားဝင်လာတာတွေ့တော့ မှလက်ပြလို့တား
ပြည့်သိပ်နေတဲ့ လူတွေကြားမှာ ထီးတစ်ဖက်နဲ့ တိုးဝှေ့စီး။
နောက်တော့လည်း အလာတုန်းက စီးခဲ့တဲ့ ဘတ်စ်ကားဂိတ်ကိုပြန်ရောက်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်စိတ်ထဲကပြင်းပြနေတဲ့ ဆန္ဒကို အပြည့်အ၀အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ရတဲ့အတွက်
ရလာတဲ့ ပီတိကတော့ ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်။
အခုမှ တဂွီဂွီမြည်လာတဲ့ အစာအိမ်ကို ငြိမ်အောင်လုပ်ဘို့ ရေအရင်ချိုးရပါဦးမယ်နော်……………………………
ပုံလေးတွေ တွေ့ရတာ စိတ်ချမ်းသာတယ်ဗျို့။
အေးချမ်းမှု အရသာလေးကိုလည်း ရနေတယ်။
ဒီရက်ပိုင်း ပုံတွေနဲ့ တွဲတင်ရတဲ့ အခက်အခဲက ကိုယ်တွေ့မို့ ကိုပေါက်စေတနာကို တကယ် အသိအမှတ်ပြုရပါတယ်။
တောင်ကြီး ရောက်ခဲ့ဖူးတာ ကြာပြီ ဆိုတော့ အလွမ်းပြေပါပဲ။
အောင်မလေး ပင်ပန်းလိုက်တာ ကိုပေါက်ရာ။
အဲဒီရေတံခွန်ကို ပြည်သူလူထု အပန်းဖြေစရာ
နေရာလေး လုပ်လို့ မရဘူးလားဗျ။
အခုကတော့ မိုးတွင်းမို့ သွားရခက်တာထား၊
ပွင့်လင်းရာသီရောက်ရင် သွားလို့ လွယ်လားဗျ။
ပင်ပန်းရကျိုး နပ်ပါတယ် ကိုပေါက်ရေ။
ကိုပေါက် အပင်ပန်းခံပြီး ရိုက်လာခဲ့ရတဲ့ စေတနာကို လေးစားပါတယ် …
ကိုပေါက်က မန်းလေးမှာနေတာဆိုတော့ ဓါတ်တော်ချိုင့် ရေတံခွန်ကို ရောက်ဖူးမယ်ထင်တယ် …
မေမြို့အ၀င်နားကနေ လမ်းခွဲသွားရတဲ့နေရာလေ … အတော်ကိုလှတဲ့ ရေတံခွန်တစ်ခုမို့လို့ အချိန်ရရင် သွားပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးပါလို့ အကြံပေးချင်လို့ပါ …
လေးပေါက် ပုံတွေက အပျံစားပဲ … စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ … ရေမြင်လျှင် ဘာမှန်း မသိပျော်နေမိတယ် …
အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ အေးချမ်းတဲ့ မြို့လေးမှာ သွားနေချင်တယ်
ဓါတ်ပုံလေးတွေ တင်ပေးတဲ့ ကိုပေါက်ကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဆြာ ပေါက်ကို တော့ တကယ် အားကျတယ်
အတော် သွားနိုင် ရိုက်နိုင်တယ်ဗျာ …
ကိုပေါက်ရေကျေးဇူးပဲနော် ပုံလေးတွေ တင်ပေးလို့ ဗဟုသုတရတယ်။ မရောက်ဖူးတဲ့နေရာက ပုံလေးတွေကို ကြည့်ရတော့ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ အင်းလေးက ဘုရားတွေတောင် ဖူးရသေးတယ်နော် နောက်ထပ်လည်း ဒီလို ပုံလေးတွေ တင်ပေးအုံးနော်။
တောင်ကြီးဖက်တခါမှမရောက်ဖူးသေးတော့ ခုလိုပုံလေးတွေမြင်တွေ့ခွင့်ရတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပုံလေးတွေကိုမြင်ရတာ စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားလိုက်တာ စိမ်းစိမ်းစိုစိုလေးနဲ့ အေးချမ်းလိုက်တာနော်
ှုဦးလေးပေါက် လုပ်တာနဲ့ တောင်ကြီးသွားချင်လာဘီနော။ တခါမှမရောက်ဖူးလို့။
2009 ခုနှစ် တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင်ပွဲကို သွားခဲ့ဖူးပါတယ်။
တောင်ကြီး မြို့ရဲ့ သာယာပုံက အခု လေးပေါက် တင်ထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။
နေချင်စရာ အရမ်းကောင်းတဲ့ မြို့လေးပါ။
နေထိုင်တဲ့လူတွေကလဲ ရန်ကုန်နဲ့ မတူပဲ တအားစိတ်အေးချမ်းတဲ့ မြို့နဲ့ လိုက်လျော
ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေကလဲ စကားပြောယဉ်ကျေးပုံက ကျွန်မရန်ကုန်သူ အံ့သြရပါတယ်။
ဈေးဆစ်လို့သူတို့မရောင်းနိုင်ရင် “ဟုတ်ကဲ့ရှင့် ၊ မရလို့ပါရှင့် “ နဲ့ ပြောပုံက ၀ယ်သူကို
ရန်ကုန်မှာ ဈေးဝယ်လို့ဆစ်လိုက်မိရင် ဈေးသည်က ရန်တွေ့တာ မြင်ဖူး၊ ကြုံရဖူးတော့
ဒီက ဈေးသည်တွေရဲ့စိတ်ထားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မိပါတယ်။
အစားအသောက်စားရတာလဲ သဘောကျမိပါတယ်။ ဘာလေးပဲစားစား အကြိုက်တွေ့ပါတယ်။
တောင်ကြီးမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း “အချစ်ရွာ“ ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးမှာလဲ စားခဲ့ဖူးပါတယ်။
“အချစ်ရွာ“ ထမင်းဆိုင်မှာက ဟင်းပုံရောင်းတာပါ။ ဟင်းမျိုးစုံတွေကို ချက်ပြီး မှန်လုံပုံးလေးထဲကို ထည့်ထားပါတယ်။ ထမင်းတစ်ခါ စားရင် ဟင်း 3မျိုးရပါတယ်။
ကိုယ်စားချင်တာ3မျိုးကို လက်ညှိုးထိုးပြီး ပြလိုက်တာနဲ့ ထမင်းပန်းကန်ထဲကို3မျိုး ခပ်ထည့်ပေးပါတယ်။ရောင်းတဲ့ ပုံစံက ရန်ကုန်နဲ့ မတူ အရမ်းထူးဆန်းပြီး စားရတာလဲ
အဆင်ပြေတော့2ရက်လောက်သွားစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တောင်ကြီးမှာ4ရက်နေပြီး ပြန်လာတော့ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ပြန်ကိုမပြန်ချင်ခဲ့တာပါ။
ကျေးဇူးပဲ ကိုပေါက်ရေ….တော်တော်တော့ ပင်ပန်းခဲ့မှာပဲ။ တောင်ကြီးကို တစ်ခါမှမရောက်ဖူးပေမယ့် ဒီလိုအလှအပတွေကို တင်ပေးလို. ကျေးဇူးဗျာ..။
ရေတံခွန်က တောင်ကြီး အတက်အဆင်း ကားလမ်းဘေးတင်ပဲလား။
ပုံတွေကတော့ တကယ်လှတယ်ဗျာ။ အပင်ပန်းခံပြီးသွားရတာလည်း ပျော်စရာကောင်းမှာပေါ့။
ဦးလေးရေ … လေးပေါက်ကို အဲ့ဒီလို လူပျိုလုပ်မှာ စိုးလို့ … မဒမ်ပေါက်ပါ တခါတည်းလိုက်သွားတာ … သူ့ခမျာ မလူးသာ မလွန့်သာ ဖြစ်ခဲ့ရပါသတဲ့လေ :eek:
လေးပေါက်ပုံလေးတွေက တကယ်လှတယ် စီမ်းစိမ်စိုစိုနဲ့
အပင်ပန်းခံပြီးရိုက်ပေးတဲ့ အတွက်ရော အပင်ပန်းခံပြီး ဆိုဒ်ပေါ်မှာ
မဝေရေ ဝေးတော့ ခရီးပေါက်
အဝေးကမြင်ရတဲ့ရေတံခွန်က တောင်ကြီးနဲ့ သုံးမိုင်ဝေးပြီး နောက်မေမြို့ကဘီးအီးဖောနဲ့တူတဲ့ရေတံခွန်က တစ်မိုင်ကျော်ကျော်လောက်ဝေးပါတယ်။
တုံမမ ဖော်ကောင်မလုပ်ကြေးလေ ဟယ်။
ကျွန်တော်တော့ တောင်ကြီးရေတံခွန်ကို အခုမှ အနီးကပ်သေချာ မြင်ဘူးတာဗျ။
ေ၇တံခွန်(၆)ပုံ ထဲမှာ ပထမပုံ အလှဆုံးဘဲ။သေချာကြည့် လေ ပန်းချီကား တချပ်ဆွဲထားသလိုဘဲ။
ကျန်တဲ့ ပုံတွေ ကတော့ ဓာတ်ပုံမှန်း သိသာစေတယ်။
ရိုက်ချက်ကတော့ ကန်းကုန်ဘဲ။ အပင်ပန်းခံတကူးတက သွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့ တဲ့ စေတနာကို
အ၇မ်းတော်တယ် ဦးပေါက် ရိုက်ချက်က။
ကြည့်ပြီးရင်းကြည့် ပုံများဖြစ်ပါသည် လေးစားလျှက်
တောတော်ရယ်သာ~~~ မာလာကငုံဖူး~~~ တပင်ကိုနှစ်ပင်ယှက်တယ်~~ ကွယ်
လှလိုက်တာ။ ရှု့ခင်းတွေကလည်းလှ။ ရိုက်တဲ့သူလည်း စေတနာကောင်းလို့ ထင်ပါရဲ့ တကယ့်ပုံကောင်းလေးတွေ။ (၉၊၁၀) ပုံကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ (၉)က ရေစိုနေတဲ့ လမ်းလေးမို့။ (၁၀)က မြူတွေ ဝေ့နေတာ မြင်ရလို့၊ ရွာနားက ရှု့ခင်းနဲ့ တူလို့ ပိုကြိုက်သွားပါတယ်။
ဘယ်ပန်းချီ ရေးလို့ မမှီ….
“ကျနော်ရင်ကို ထိရှသွားစေ မိန်းမောသွားစေတဲ့မြင်ကွင်းပါ“အဲဒီပုံအလယ်က ဖြူဖြူအတန်းလိုက်လေးက တိမ်လား မြစ်လား၊ လှတယ်နော်၊
မိုးစိုနေတဲ့ လမ်းကလေးပေါ်မှာ ဆိုင်ကယ်လေးက Rule of third အတိုင်းဘဲ။ပိုလှစေပါတယ်။
လေးပေါက် ပုံလေးတွေက လွမ်းစရာကောင်းလိုက်တာ..
သဘာဝတရားရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်များကို မသိမသာနဲ့ အမိအရ ဖမ်းဆုပ်ခဲ့တာပါလားနော်….
ပုံတွေကို ကြည့်ရတာ လှတယ်ဆိုတာထက် အများကြီးပိုပြီး… ….လွမ်းစရာကောင်းနေပါတော့တယ်…
ဲဖြူဖြူအတန်းလေးတွေက မိုးငွေ့တွေအောက်က တိမ်တွေပါဗျာ။
ကျနော်ကလဲ အဲလို အလွမ်းရသကို နှစ်သက်တယ်လေ။
ရေတံခွန်လေးကို အပန်းဖြေနားနေရာအဖြစ် ကျကျနနလေး လုပ်ရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်မိတယ်…တောင်ကြီးသွားရင် လည်စရာတခုတိုးတာပေါ့….
အဲ့ဒီရေတံခွန်က တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ ရေမြောင်းတွေကနေလာတာဗျ ……. ရေတွေက တအားညစ်ပတ်တာ …. အဲ့အနားမှာ အပန်းဖြေဖို့တော့ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ……… နွေရာသီဆိုရင် အမှိုက်ချည်း ……… ရှုပ်ပွနေတာ ….. ကျွန်တော်က အေးသာယာမှာ ကျောင်းတက်လို့သိတာနော …….. လှတာကတော့ တအားလှတယ် ……
ဟုတ်လားဗျ ကျွန်တော်က ပုံကြည့်ပြီး ပြောကြည့်တာပါ ..ပြောပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်….
ဟုတ်တယ်ဗျ သိတဲ့သူကပြောတာက ဒီရေတွေအားလုံးတောင်ကြီးမြို့ကရေတွေအကုန်ဒီမှာစုတယ်လို့ပြောတာဘဲ။